मास्क नलाई हिँड्नेलाई एक वर्ष जेल ! – Sidha Online Post
मुख्य पृष्ठ /International/मास्क नलाई हिँड्नेलाई एक वर्ष जेल !
मास्क नलाई हिँड्नेलाई एक वर्ष जेल !
अमेरिकाको कोलोराडो राज्य स्थित इंगलहुड सहरमा मास्क नलगाई घरबाहिर निस्कनेले एक वर्ष जेल बस्नुपर्ने आदेश जारी भएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफु आफ्ना नागरिकलाई जवर्जस्ती मास्क लगाउन बाध्य पार्ने पक्षमा नरहेको बताइरहेका बेला त्यहाँ यस्तो नियम लागु गरिएको हो ।
सो सहरका प्रमुख जे. शवन लेविसले अघिल्लो साता त्यहाँको सिटी काउन्सिलबाट यस्तो नियम अनुमोदन गराएका हुन् । अब त्यो सहरमा ६ वर्ष माथिका जो कोहीले घरबाट बाहिर निस्कँदा अनिवार्यरुपमा मास्क लगाएकै हुनुपर्छ । घरबाहिरका सार्वजनिक वा निजी स्थलमा समेत मास्कको प्रयोग अनिवार्य गरिएको छ ।
यस्तो गल्ती गर्नेलाई पहिलो पटक मात्र १५ अमेरिकी डलर जरिवाना गराएर छ्होदिने छ भने दोस्रो पटकमा २५ डलर तिर्नु पर्नेछ । आदेशमा लेखिएको छ यस्तो जरिवाना अधिकतम २ हजार ६ सय ५० डलरसम्म हुनसक्छ । त्यसै गरी एक वर्षसम्म जेल सजाय वा दुवै समेत हुनसक्छ ।
मास्क नलाउने अडानमा रहेका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि अघिल्लो शनिवार देखि सार्वजनिक समारोहमा मास्क लगाउन थालेका छन् । तर राष्ट्रव्यापी रूपमा अमेरिकी नागरिकहरूलाई मास्क लगाउन आदेश भने आफूले नदिने बताएका छन् । अमेरिकाका वरिष्ठ संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर एन्थोनी फौचीले सकेसम्म सर्वसाधारणलाई मास्क लगाउने अनिवार्य व्यवस्था गर्न आग्रह गरेसँगै राष्ट्रपति ट्रम्पको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो ।
डाक्टर फौचीले कोरोना सङ्क्रमण न्यूनीकरणका लागि मास्क लगाउनु अति नै आवश्यक रहेको बताएका थिए । ‘मास्क लगाउनु अति नै आवश्यक छ । हामी सबैले मास्क प्रयोग गर्नुपर्छ,’ डाक्टर फौचीले भनेका थिए ।
अमेरिकामा मास्क लगाउने नलगाउने भन्नेबारे विषयमा राजनीतिकरण भएको छ । अधिकांश राज्य सरकारले घरबाट बाहिर निस्कँदा अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउन आदेश दिएका छन् । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिएयता मास्क नलगाउने बताइरहेका राष्ट्रपति ट्रम्पले गत शनिवार पहिलो पटक मास्क लगाएका थिए ।
तर, शुक्रवार फक्स न्युजसँग कुरा गर्दै राष्ट्रव्यापी रूपमा मास्क अनिवार्य गर्ने कुरामा आफू सहमत नभएको बताएका छन् । मास्क लगाउने नलगाउने भन्नेबारे नागरिकलाई ‘स्वतन्त्र’ छाडिदिनुपर्ने पनि ट्रम्पले बताए ।
जापानमा बाढीका कारण मृ’त्यु हुनेको सङ्ख्या ५० पुग्यो, दर्जनौँ बे’पत्ता
अर्को महिना देखि कोरोनाको खोप सर्वसाधारणका लागि उपलब्ध हुने
सैनिक हेलिकप्टर दुर्घटना, दुई जनाको मृत्यु
२० देखि ४० वर्ष उमेरसमूहबाट तीव्र रुपमा कोरोना फैलिँदै छः डब्लूएचओ